नुवाकोटमा जन्मेर घाँस का’ट्ने, गाईभैंसीको गोबर सोहोर्ने र काठमाडौंमा आएर ५०० मा भाँडा माझ्ने अन्जली लामा बनिन् विश्वकै चर्चित मोडेल, अहिले हलिउड फिल्ममा डेब्यू गर्दै – Online Nepalaja
January 29, 2021 179
फिल्ममा अञ्जलीले हलिउड स्टार कारा डेलेविन्ज, मारिका गे हार्डेन ,मार्गरिटा बाय, ईवा लोन्गोरिया, र लीवनर वारेला जस्ता चर्चित कलाकार सँग काम गर्न लागेकि हन् ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
एसएलसीपछि काठमाडौं आएँ। सहर आएपछि जिस्क्याइ कम हुन्छ कि भन्ने लागेको थियो, कहाँ पाएर कम हुनु! यहाँ त गाउँमा भन्दा धेरै जिस्काउँथे। नानाथरिका शब्द प्रयोग गर्थे। त्यस्ता शब्द मैले काठमाडौं आएपछि मात्र थाहा पाएँ। बरू गाउँमा त्यस्तरी होच्याएको थाहा थिएन। सहरका मान्छे सभ्य, बुझेको, मिलनसार होलान् भन्ने सोचेको थिएँ, होइन रहेछ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
काठमाडौं आएर थुप्रै समस्या भोग्नुपरे पनि यहाँ मेरो निम्ति अवसरका ढोका खुल्दै गए। यहाँ मलाई जिस्क्याउनेहरू त थिए, त्योभन्दा बढी मैले साथ दिने साथीभाइहरू पाएँ। उनीहरूकै सहयोगले मलाई अगाडि बढ्न प्रेरित गर्‍यो। मलाई फेसन र मोडलिङको ज्ञान भयो।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
मैले लगभग हरेस खाइसकेको थिएँ। तै पनि मनमा आस बाँकी थियो। २०१६ को अन्त्यमा यहाँको सबै काम छाडेर मुम्बई नै जाने निधो गरेँ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
त्यसपछि आफूले चाहेको काममा लगनशील भएर लाग्नुपर्छ। इमानदार हुनुपर्छ। हिम्मत गरेर निरन्तर लाग्यो भने सफलता टाढा छैन, यो मेरो अनुभव हो। तीन वर्ष मात्र भयो, मैले अन्तर्राष्ट्रिय करिअर सुरू गरेको। यो तीन वर्षमा पछिल्लो सात वर्षमा नपाएको सफलता पाएको छु। पहिलो सफलता त मलाई नेपाली भनेर चिनाउन पाउँदा असाध्यै खुसी लाग्छ। तीन वर्षमा तीनवटा अवार्ड पाएँ, जुन मेरो लागि एकदम अविश्मरणीय छ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
Prevम’हिना’वारीको समयमा यौ;न सम्पर्क गर्न हुन्छ की हुदैन ? डा. सबिना(भिडियो सहित)
Next१४ बर्षको उमेरमै बहुनी र राइनीको श्रीमान बनेका गोपालले मिलाएर राखेका छन् दुई श्रीमतीलाई, सौतासौताको यस्तो छ माया (भिडियोसहित)